Usafe wakaramwa. Zvinhu zvikuru zvinotora nguva. Iva nemwoyo murefu. - Anotungamira - Quotes Pedia
Usafe wakaramwa. Zvinhu zvikuru zvinotora nguva. Iva nemwoyo murefu. - Asingazivikanwe
Muhupenyu, iwe ungatarisana nemamiriro ezvinhu akasiyana pawainzwa kuda kukanda mapfumo pasi. Munhu akura uye akangwara aisamboita zvakadaro! Rangarira kuti hapana chinoshanduka kuita budiriro mushure mekutanga kuedza.
Hunhu hwese hwakabudirira hwaunoona hwakatenderedza nhasi hapana mumwe kunze kweavo vasina kumbobvuma kutadza. Vangave vakakundikana muhupenyu hwavo kane miriyoni, asi havana kuzvigamuchira kunyangwe kwenguva imwechete. Ivo vagara vari ivo vakaramba vachiedza vachidzokororazve.
Hupenyu hausi mubhedha wemaruva, uye munzira iyi yakatsikwa, iwe unogona kuwana matambudziko, asi vakabudirira ndivo vanoramba vachifamba nenzira imwechete kunyangwe zvimhinganidzo zvese zvakauya nenzira iyoyo.
Kuomerera chinhu chakakosha zvakanyanya pakufunga kana iwe uchizokwanisa kubudirira muhupenyu hwako. Panga paine nguva dzaunonzwa sekuda kukanda mapfumo pasi, asi iyo nguva yaunoregera, unobvuma kutadza kwako uye kuramba kumira pazvese.
Ukabvuma kukundwa kwako, mutambo unobva ipapo ipapo. Kana uchinyatsoda kubudirira, iwe unofanirwa kuve nekutenda mukati mako, uye kudzidza kuramba kuerera kunyange kana wakundwa kakawanda.
Rangarira kuti budiriro inouya chete kune avo vasina kumborega. Ivo vakapaira ndivo chete vanoramba vachipa zvikonzero kwehupenyu hwavo hwese. Kana iwe uchinyatsoda kuzvimisa semuenzaniso wenyika, dzidza kushanda, pane kubvuma kutadza kwako.
Iva nemoyo murefu uye uzvipe nguva iwe pachako. Zvinhu hazviitike kamwe kamwe. Iwe haugone kuzviona iwe umire ipapo pane iyo nhanho yekubudirira pamusoro pehusiku. Iwe unofanirwa kuzvipa wakakwana nguva kuti urambe uchifambira mberi kusvika wasvika iyo yepamusoro.
Nenzira imwecheteyo, zvinhu zvinotora nguva kuti zviitike. Nguva zhinji, vanhu vanowanzo kutadza chete nekuti vanorasikirwa nekushivirira kwavo pakati. Kana iwe uchinyatsoda kuwana budiriro, iwe unofanirwa kunzwisisa kukosha kwekugamuchira mamiriro sezvavanouya, uye zvakadaro chengeta kutenda kwako kwakasimba. Iva netariro, uye iwe unogona kuwana chero chawakambo shuwa!
Iva Nomwoyo murefu Quotes
Great Kukurudzira Quotes
Great Quotes Nezve Hupenyu
Great Quotes Nezve Kubudirira
Great Quotes YeUchenjeri
Chikuru Pfupi Quotes
Usamborega Kukurisa Quotes
Usamborega Kupa Quotes
Usambofa Wamira Kuedza Quotes
Mwari havazokuise munzvimbo yausina kusimba zvekumira. - Asingazivikanwe
Mwari vane nzira dzavo dzekukuyedza nekukuisa mumamiriro akasiyana nguva nenguva. At…
Iva nemwoyo murefu. Zvimwe zvinhu zvinotora nguva. - Asingazivikanwe
Iva nemoyo murefu, zvimwe zvinhu zvinotora nguva. Hongu, tinowanzo kuve vasingashiviriri zvekuti tinoshuvira zvinhu zvakapoteredza…
Ini handidi hupenyu hwakakwana. Ndiri kungoda kufara, ndakakomberedzwa neshamwari dzakanaka dzinondida zvandiri. - Asingazivikanwe
Hapana hupenyu hwemunhu hwakakwana uye kana uchinge wakwanisa kuzvinzwisisa, zvirinani!
Kufungisisa kunongouraya mufaro wako. Usazviita. - Asingazivikanwe
Kufungisisa inyaya yakakomba pakati pevanhu mazuva ano. Ehe, iwe haufanire kuve usingazive nezve…
Kana vanhu vakakutaka nematombo, usazvikanda kumashure. Unganidza iwo ese uye uvake umambo. - Asingazivikanwe
Kana vanhu vakakutaka nematombo, usazvikanda kumashure. Unganidza iwo ese uye uvake umambo. -…